Microsoft Silver UMlingani wokuFunda
I-innovative Technology Solutions yi-Silver Learning Partner yaseMicrosoft ephakamileyo kwaye inika zonke izifundo ezinkulu zeMicrosoft. UMicrosoft unguvulindlela kwi-teknoloji ye-IT kwaye inikeza uluhlu olubanzi lwezakhono ezibandakanya iMicrosoft Office Izicelo, ulawulo lweengcaphephe zezoshishino, ubuchule, ukuphathwa kwezicelo zenkampani, ukuphathwa kwedatha, kunye nezinye ezininzi.
Ukufumana isitifiketi seMicrosoft kubonisa ukuba usebenzise ubuchwephesha kwi-teknoloji ethile yeMicrosoft, i-Innovative Technology Solutions Izibonelelo zeComputer Certification kwiGurgaon India, yethuUqeqesho lweMicrosoftInika amandla imibutho yakho ukuba inikeze ngokugqithiseleyo ubuchwepheshe beMicrosoft ukukhulisa umkhiqizo, i-Good Studies ibonisa ukuba izitifiketi ze-IT zandisa amathuba okufumana umsebenzi omhle, i-89% yokuqesha abaphathi bathi i-certs ze-IT ziphambili. Ukuqeqeshwa kweMicrosoft yethu kunika izitifiketi kumncedisi, ideskithophu, isicelo, isiseko sedatha kunye namaphulo ophuhliso. Innovative Technology Solutions yiNombolo ye-1 ye-Microsoft Certification e-Gurgaon, eDelhi NCR, eIndiya nakwi-USA, e-UK nase-Australia.
Yintoni oza kufunda?
I-aspirants ze-IT ezivela kulo lonke ihlabathi zingabhalisa kwi-ITS kwiziqinisekiso ezahlukeneyo ze-MS kwaye zifumane ukuvavanywa kwazo ngokufezekisa izitifiketi ze-Microsoft.
Thelekisa iNkqubo yoMyalezo kunye neNkqubo yokuthobela
Ukuyila nokuSebenza ngeBhokisi leeLebhu yeeNdawo eziPhambukayo
Qinisekisa impembelelo yokungenisa i-SQL ye-standalone database.
Hlela abasebenzisi, amaqela kunye nokubhaliselwa kwimeko yeA Active Directory.
1 Ikhosi 20740 - Ukufaka, Ukugcina nokucwangcisa nge Window Server 2016 Jonga Okuninzi
2 Ikhosi 20741 - Ukunxibelelana ngeWindows Window 2016 Jonga Okuninzi
3 Ikhosi 20742: Identity nge Window Server 2016 Jonga Okuninzi
1 I-20341: Iisombululo ezingundoqo ze-Microsoft Exchange Server 2013 Jonga Okuninzi
2 I-20342B: Iisombululo eziphambili ze-Microsoft Exchange Server 2013 Jonga Okuninzi
3 Microsoft Exchange Server 2013 Jonga Okuninzi
4 20345-1A: Ukulawula i-Microsoft Exchange Server 2016 Jonga Okuninzi
5 I-20345-2: Ukuyila nokuSebenzisa iMicrosoft Exchange Server 2016 Jonga Okuninzi
1 Ikhosi 10986B - iMicrosoft SQL Server 2016 Jonga Okuninzi
2 UkuCima iData ngeStact-SQL Jonga Okuninzi
3 Ukulawula i-SQL yeSiseko seZiseko Jonga Okuninzi
4 Ukubonelela ngeSQL yolwazi Jonga Okuninzi
1 I-20533: Ukuphunyezwa kweZicrosoft Infrastructure Solutions Jonga Okuninzi
2 I-20532 B: Ukuphuhlisa iMicrosoft Azure Solutions Jonga Okuninzi
3 20487B - Ukuphuhlisa i-Windows Azure kunye ne-Web Service Jonga Okuninzi
1 Microsoft Office 365 Jonga Okuninzi
2 20347A: Ukunika amandla nokulawula i-Office 365 Jonga Okuninzi
3 Ofisi ye365 EndUser Jonga Okuninzi
1 I-20331: Iisombululo ezingundoqo ze-Microsoft SharePoint Server 2013 Jonga Okuninzi
2 20332: Iisombululo eziphambili ze-Microsoft SharePoint Server 2013 Jonga Okuninzi
3 Microsoft SharePoint Server 2013 Jonga Okuninzi
4 20488B: Ukuphuhlisa iMicrosoft SharePoint Server 2013 Core Solutions Jonga Okuninzi
5 20489: Ukuphuhlisa i-Microsoft SharePoint Server 2013 Advanced Solutions Jonga Okuninzi
Funda naliphi na ixesha
Sebenzisa iWebhsayithi YAYO ukugqiba ikhosi yakho nayiphi na ixesha oyithandayo
Phambili Umsebenzi Wakho
Ukuphuhlisa ubuchule abaqeshi abajongeyo. Finyelela kwiikholeji ze-1500 mahhala.
Thatha izakhono ozifunayo ukuze ubambe, usebenze, kwaye uhlaziye idatha yehlabathi eliqhutywa ngedatha namhlanje.
Thatha uMsebenzi wakho kwiNqanaba elilandelayo
Iinkonzo ezongeziweyo zenkxaso ezivela kubalingani